Tutorial momba ny fametrahana Gentoo amin'ny CD mivantana | Avy amin'ny Linux
x11tete11x | | Fitsinjarana, GNU / Linux, Tutorials / Manuals / Tips
Salama aho x11tete11x, ity no anjara birikiko faharoa, ary amin'ity indray mitoraka ity dia mitondra Tutorial momba ny fametrahana anao aho Gentoo
Voalohany indrindra tiako horesahina fa izay rehetra ilainao dia ao amin'ny Gentoo Wiki, na ao amin'ny Arch WikiNy fanontaniana mifandraika amin'ny fametrahana dia ao amin'ny boky Gentoo hhandbook. Ataoko izany satria nanontanian'olona maromaro aho, ary satria hampiako ny granita fanaoko rehefa mametraka Gentoo aho.
Fantaro fa ny olona izay mamaky dia tena ankasitrahana amin'ity distro ity. Eny, distro izy io izay ahafahana mamaha ny ankamaroan'ny olana amin'ny alàlan'ny famakiana ny wiki sy ny fanaovana fikarohana kely (izany hoe raha mametraka fanontaniana ianao dia mamaly "jereo ny wiki", midika izany fa amin'ny maha Gentoo mpampiasa anao dia tsy manao zavatra mety xD) Tsy midika izany fa tsy voavaly ny fisalasalana
"Tsotra", fa ny habetsaky ny antontan-taratasy dia manolotra anao hamaky hamaha ny olanao.
Ankehitriny aho hanome hevitra momba ny momba an'i Gentoo, ny tena manaitra azy, ary ny mampiavaka azy amin'ny distro Linux hafa. Hanomboka amin'ny fototra isika fa Gentoo dia code code based distro, Inona no dikan'ity? , izay tsy toy ny distro mahazatra (precompiled) toy ny Debian, Ubuntu, andohalambo, Manjaro, Fedora, SUSE, ary lava sns sns; Rehefa mametraka fonosana iray dia tsy misintona ny azo ampiharina (binary, .deb, .rpm, .pkg.tar.xz, sns) ary apetraho, fa aleo sintonina ny kaody loharano niavian'izy io, atambatra araka ny fikirakirantsika sy izay fitsipika nofaritantsika ho an'ny fonosana, ary amin'izany dia mamokatra azo tanterahina, izay apetrany avy eo.
Eo no misy ny fahasamihafana, ary inona no mampiavaka an'ity distro ity, tsy ny hoe manangona ny fonosana fotsiny izy, fa manapa-kevitra ny amin'ny fanohanana izay asongadin'ny fonosana tsirairay. Ny vokatra mivantana amin'ny fanamboarana sy ny fanangonana ireo fonosana dia ny hafainganana. Fa maninona Andao asehoy ohatra ity:
Avelao i X ho distro voarindra (ireo efa nolazaiko teo aloha), mba hahafahana mametraka ny distro X amin'ny karazana masinina isan-karazany, ilaina ny fanangonana ireo fonosany miaraka amin'ireo torolàlana nomen'ilay masinina taloha. Amin'izany fomba izany, raha tiantsika ny hihazakazaka manomboka amin'ny Pentium II izy ireo, dia hanangona ny fonosan'izy ireo miaraka amin'ny torolàlana fampianarana Pentium II.
Inona no vokatr'izany? Inona amin'ny processeur vaovao, ohatra hoe i7, ny fonosana dia tsy hanararaotra ny fahafaha-manao rehetra omen'ny farany, satria raha ampifangaroina miaraka amin'ireo andiana torolàlana nomen'ny i7 izy ireo, dia tsy hovonoina ho an'ny mpamily alohan'ity, satria tsy misy ireo torolàlana vaovao ireo.
Gentoo, amin'ny alàlan'ny fampidinana ny kaody loharano sy ny fanangonana azy ho an'ny mpanamboatra anao, dia hanararaotra ny fahafahany feno, satria raha apetrakao amin'ny i7 izy dia hampiasa ny torolàlana an'ny farany, ary raha apetrakao amin'ny Pentium II, dia hampiasa ireo izay mifanaraka amin'ilay farany.
Etsy ankilany, azonao atao koa ny manamboatra ny karazana fanohanana tadiavinao fonosana. Mampiasa aho KDE y Qt, avy eo tsy liana amin'ireo fonosana misy fanohanana ahy aho GNOME y GTK, noho izany dia lazaiko aminao ny manangona azy ireo tsy misy fanampiana ho azy ireo. Amin'izao fomba izao, rehefa mampitaha ny fonosana mitovy amin'ny Gentoo sy amin'ny distro X dia maivana kokoa ny fonosana Gentoo. Ary satria ao amin'ny distro X dia mahazatra ny fonosana, hanana fanohanana izy ireo amin'ny zava-drehetra.
Ankehitriny, rehefa nanao fampidirana aho dia avelako ho anao ireo rohy mankany amin'ireo fisie fikirako izay miaraka amin'ilay torolàlana PDF inona no nataoko ny fomba fametrahana Gentoo amin'ny CD Live Linux (Ubuntu, Fedora, SUSE, Backtrack, Slax, na izay tonga ao an-tsaina) na fizarazaran'izy ireo manana Linux distro napetraka.
Rohy mankany amin'ireo fisie fanamboarana ahy
Rohy mankany amin'ny Torolàlana PDF
Ho an'ny adala indrindra amin'ny fampisehoana, tamin'io torolàlana io ihany no namelako torohevitra vitsivitsy anao hahazoana fampisehoana hatramin'ny 30% avo kokoa noho ny fametrahana mahazatra:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Tutorial momba ny fametrahana Gentoo amin'ny CD mivantana
Nanomboka nijery ilay boky torolàlana aho mba hananganana gentoo.
Tena tsara, misaotra ny mpitari-dalana.
Nolazaiko hatrany fa tsy mitombina ny tahotry ny mpampiasa marobe manoloana ity distro ity na hakamoana fotsiny izany.
Gentoo Linux no fitiavako voalohany voalohany, tamin'ny androny izay nananako installer graphique, fotoana nahafinaritra ry zareo.
Tsara homarihina (tsy manandrana mampihena ny asanao), fa misy torolàlana fametrahana ho an'ireo izay te hanana Gentoo Linux amin'ny fotoana fitahirizam-bolan'izy ireo, izany dia avy amin'ny Live DVD navoaka ho an'ny tsingerintaonan'ny distro (manazava fa hanao izany apetraho ny tontolon'ny birao rehetra, Gnome, KDE, XFCE, sns.).
Fandraisana anjara faharoa feno hafaliana, sa tsy izany? Tiako ny fandraisana anjara misy lanja teôria lehibe toa ireny. Alao an-tsaina ange raha napetrakao tao amin'ny paositra ilay torolàlana hahaha. Ry namana tena tsara, manorata hatrany. Mandra-pahatongan'ny fampianarana manaraka ... tsy haiko, Crux angamba?
hahaha misaotra, mety xD hahaha
debish dia hoy izy:
«(…) Hofarininay miaraka amin'ny votoatin'ny torolàlana Pentium II (…)»
Tsy marina mihitsy izany. Rehefa manangona fonosana iray ianao dia afaka manapa-kevitra hoe inona no fizarana faran'izay kely indrindra hiasa ny programa natambatra ary ho an'ny mpanamboatra izay tianao hanatsara ny fanangonana. Ary na izany na tsy izany dia mazàna misy safidy iraisana izay mamokatra kaody mimari-drindrina voamarina ho an'ny ankamaroan'ny processeur. Ary koa, misy tolotra marobe mampitaha ny fahasamihafana eo amin'ny fampisehoana eo amin'i Gentoo sy ny hafa, ary tsy zavatra mahatalanjona araka ny lazainao azy io. Afaka mahita ny iray amin'izy ireo ianao eto (http://socios.linuca.org/zub/zubmark-20031230.html), na dia betsaka aza ny hafa ary mazava ho azy fa tsy misy azo raisina ho fahamarinana tanteraka, ilaina foana ny mandalina amin'ny antsipiriany izay tombana sy ny fomba.
Mazava fa ny tanjon'ny hevitra dia ny hanazava fotsiny, satria ny fidiranao dia milaza fanontaniana izay tsy marina tanteraka. Angamba ny fitiavanao (heveriko) ho an'i Gentoo, mitranga amiko izany indraindray rehefa mankalaza ny hatsaram-panahin'i Debian aho, iza no mahalala.
Na izany na tsy izany, arahaba, ary hanohizana ny fanaparitahana ny fahalalahana!
Valio ny debise
Raha marina izany dia nataoko ny fanazavana raha raisina an-tsaina fa raha mpampiasa "birao" ianao dia hikatsaka ny hahazoany tombony betsaka indrindra amin'ny solo-sainao mba hiarahanao manokana ho an'ny mpanera anao. Azoko fa ny lazaiko dia toa haingana kokoa, ao amin'ny PDF dia manome torohevitra aho handaminana rafitra avo lenta izay ampandehanana teknolojia antsoina hoe grafita izay amin'ny teny fohy dia fohy ny zavatra ataony dia manatsara ny tsingerin'ny " ho an'ny "type and" raha "misy ny mpampiasa mampiasa an'ity tatitra ity hatramin'ny 30% fampisehoana fanampiny, dia napetrako niaraka tamin'io saina io sy miaraka amin'ny -O3 ny haavon'ny fanatsarana faran'izay betsaka, raha ny fijeriko azy, ary mampitaha azy amin'ny kubuntu, izay koa Nandritra ny fotoana fohy tao amin'ity masinina ity, Gentoo, miaraka amin'io fanamboarana io, mihazakazaka haingana kokoa. Tena tsy azoko tsara ny fomba fiasan'ny grafita, toa ny nataony dia ny mamorona "kofehy" marobe amin'ny fanatanterahana ny tranga ho an'ny, amin'ity fomba ity, raha ny filaharan'ny fotoana fanatanterahana dia hahatratra ny filaharana 1 (satria mety misy kofehy isaky ny iteration ny for) raha ampitahaina amin'ny filaharana n an'ny mahazatra ho an'ny, io no azoko xD, mitovy ihany raha misy manana mazava momba an'io, tiako hohazavainao amiko izay ataony marina 😀
Agggghhhhhh comp Halako ny manitsy ahy ny takelaka, ianao * hanangona
Raha mampitaha ny tenantsika amin'i Kubuntu isika ... xD
Tsy dia ratsy loatra i Kubuntu, tena tiako ny: D, indrindra taorian'ny nijanonan'ny Canonical ny fanohanany azy ary notazonin'ny fiarahamonina izy, tena nandeha tokoa. Indray andro dia leo aho ary nandoko ny tenako nilalao kely tamin'ny kubuntu:
Kubuntu 12.10 32-bit amin'ny boot, tsy mikasika na inona na inona mihitsy
Kubuntu manomboka aorian'ny nanaovako fanovana vitsivitsy momba azy (misintona serivisy marobe sns sns sns ambany nepomuk ovay ny manager window fa napetrako ny openbox sns)
Tamin'ity dia hadinoko ny namono ny fizotran'ny VMWare, izay mandany 50mb, ka tsy maintsy ahena ny 50, nivadika 10hs i Kubuntu
Ary ireo fisamborana rehetra ireo dia niaraka tamin'ny plasma activated, raha tiako ny manala azy ary asio ohatra BE: Shell, hovonoiko ny fizotran'ny desktop-plasma
Tiako i Kubuntu satria noho ny faharatsian'ny 9.04 sy 9.10 dia nanomboka scouting distros izay nampandeha tsara ny KDE aho ary izany no nahafantarako Arch 😀
Rehefa nanomboka nampiasa Arch aho ary nahita ny hakanton'ireo injenierany sy ireo foto-kevi-panorenany, fantatro fa tao / trano, mamy / trano izy io.
Manontany anao momba ny fakana sary aho: ny takelaka ambony dia tontonana nentin-drazana KDE? Raha izany, inona ny typeface ampiasainao ao ary inona ny haben'ny eo amin'ny tontonana? Ny famonjena ny loko no zavatra akaiky indrindra hitako tamin'ny MacOS tamin'ny alàlan'ny KDE.
Mikasika ny haben'ny takelaka ao amin'ny KDE, dia toa tsy mampino fa mbola tsy natambatr'izy ireo ny patch openSUSE izay milaza aminao ny halehiben'ilay takelaka rehefa ataonao lehibe na kely kokoa izy io, F / LOSS !!! xDD
Msx misy ve izany patch? : Sa mianiana aminao aho fa nitady azy hatraiza hatraiza, manana rohy ve ianao? Ok, mitovy ny haavon'ny xD, ny endri-tsoratra raha tadidiko tsara dia ny sans serif, iray amin'ireo tonga tampoka, ny tsiambaratelo hahatonga ny endritsoratra ho tsara dia tsara dia ny mampavitrika ny safidin'ny fanalefahana endri-tsoratra rehetra, apetaho ny malama "feno", ary milalao miaraka amin'ny dpi, manana azy ireo aho ao amin'ny 120, ary hahatratra izany vokatra izany 😀
«Msx misy ve izany patch? : Na mianiana aho fa nitady azy hatraiza hatraiza, manana rohy ve ianao? Hanome ady aho raha hahavita azy io any Gentoo haha, »
Tsy hitako ny pejy ho azy izao, rehefa eo am-pelatanako izy dia omeko anao.
Na dia avelako ho anao aza ny iray amin'ireo rohy marobe izay niresahana ilay patch voalaza etsy ambony NA ny mety hanovana ny haben'ny takelaka amin'ny fampiasana isa fa tsy ojimeter> :(
«Ny fanaovana endritsoratra tena tsara dia ny fampandehanana ny safidy fanamorana endri-tsoratra rehetra, apetraho ny anti-aliasing" feno "ary milalao miaraka amin'ny dpi, ataoko ao anatin'ny 120 izany,»
Hmm, tsy azoko atao ny manazava aminao ny tena halako momba ny font antialiasing, raha ny marina dia zavatra voalohany tsy tiako foana io ary avy eo apetrako amin'ny hazavana na antonony rehefa avelan'ny mpamoron-kira (fa tsy ny KWIN).
Rehefa manana fotoana kely aho dia ho hitako raha avelako ho anao io, na dia ny tena marina aza dia miaraka amin'ireo fanovana vitsivitsy nataoko tamin'ny tontonana nataoko (24px, plasmoids fanampiny fanampiny, sns.) Tena mahazo aina aho satria miaina ny fampiharana aza manomboka avy amin'ny yakuake 😛
Vao avy namaky ny benchmarks aho, averiko indray fa mety ho simba ny fanoratako noho ny hatsaram-panahiko tsara miaraka amin'i Gentoo, saingy efa antitra tokoa i Benchmark ._. Gentoo 1.4 (efa ao amin'ny andiany 12 izy ireo) ary ny GCC dia nandroso be ihany ary ny olan'ny fikirakirana multicore, na izany aza ny zavatra niainako dia izao rehefa apetrakao amin'ny -O3 na koa -O2 ny tsiro ao am-bavanao izay mamela anao, toy ny hoy io benchmark io: "Amin'ny ankapobeny dia toa nahavita namita ny ankamaroan'ny asa i Gentoo raha oharina amin'i Debian sy ireo bizina namboarina teo alohany." Ankehitriny rehefa nasiako grafit io dia hitako manokana fa tsapa fa mamita zavatra haingana kokoa izy io. 😀
X11tete11x tena tsara raha nahalala momba an'ity lahatsoratra ity aho dia niandry fotoana kely xD. Amin'izao fotoana ametrahako ny X ao amin'ny Gentoo izao dia namporisika ahy ianao hanandrana indray fa tsy Funtoo izay natsangako tato ho ato. Hatreto dia mandeha tsara ny zava-drehetra, ny fametrahana anao ao anaty paty dia nanompo ahy tsara. ny hany olana mahazo ahy dia ny fanavaozana tanteraka ny rafitra, rahoviana no marina kokoa ny fanaovana azy. Tamin'ity indray mitoraka ity dia nataoko taorian'ny famerenana voalohany izay efa ananako tontolo iainana ary manavao ny gcc alohan'ny hametrahako programa bebe kokoa. Manomboka misintona ireo rohy ireo aho, bilaogy mahafinaritra mahatsapa tena ahazoana aina eto xD.
PS: Vantany vao nahavita nanangona xorg-server tsy misy hadisoana, dia mihobia fa tsy dia sarotra loatra izany raha mamaky tsara ianao. Raha ny momba an'i Blaire Pascal Crux dia tsy hevitra ratsy, ireo distros ireo no tena ianaranao. Salama.
Miala tsiny, efa nampiasa freebsd ve ianao na derivative an'ny bsd?
Eny, raha ampitahaina amin'ny gentoo, inona ny fahasamihafana misy eo aminy? na tombony.
Miarahaba anao, efa novakiako daholo ny pdf 😀 tsara be ity.
Mahantra lavitra lavitra ny FreeBSD dia nanana olana tamin'ny mpamily aho, ary ohatra hoe lasa adala ilay milina mangatsiatsiaka, etsy andaniny dia lasa lany andro aho, ary miaraka amin'ny hafainganan'ny fandrosoan'ny kernel Linux dia manana zavatra mahaliana bebe kokoa izy. , izany no antony nisafidianako Gentoo 😀
Eny, raha ny marina dia nikaroka gentoo vs freebsd aho (ho ahy irery no mahalasa lafo azy).
Fa gnu / linux dia hitako fa voaomana kokoa amin'ny karazana toe-javatra rehetra izany. Mihoatra noho ny zava-drehetra amin'ny fitaovana maoderina kokoa.
Nametraka gentoo amin'ny takelakao koa ve ianao? 😀
«Ho ahy irery no mahatonga ny endriny» ROFL !!!
Hahahaha, Gentoo amin'ny iPad, angamba miaraka amin'ny openiboot fa tsy maintsy manangona ny kaody loharano ianao, raha vao mametraka ubuntu ianao, fa hahafinaritra be kosa ny gentoo 😉
Haha tsia tsia, ity iPad ity dia ratsy toetra amiko, mpandidy be loatra xD aho, tiako ny mametraka ny tanako ary mametaka izay rehetra azoko atao, ary amin'ny iPad mifamatotra tànana sy tongotra aho, tsara ny rafitra, saingy tsotra fotsiny izany, tsia tsy misy azo atao uu
Che, andro vitsy lasa izay, nisy namana iray nanoro ahy ilay Galaxy Note azo entina (heveriko fa 7 ″), izay gimikick, ary ny zavatra voalohany nataoko dia ny nankany amin'ny menio ary hijery hoe inona ny kinovan'ny Android mandeha (4.04). Ny mahia dia nanao tarehy WTF !!! ary nanontany ahy izy hoe inona no nilalao izay tsy hitany mihitsy xD
Mihevitra aho fa mora loatra ny maka tahaka antsika, amin'ny maha-zavatra voajanahary antsika, ny toetrantsika amin'ny maha-mpahay siansa solosaina antsika ary toa tsy zavatra be dia be eo amin'ny besinimaro izay raha tsy eo imasom-baovao dia tsy misy izany; ao anatin'ity toe-javatra ity dia mety tsara ny iOS sy ny Metro - toy ny Android ho antsika !!!
Fampidirana tsara an'i Gentoo ho an'ny olona tsy mahalala azy.
Antsipiriany fotsiny: Arch Linux dia azo atambatra tanteraka avy amin'ny loharano ary manohy mampiasa azy amin'izany, izany hoe, ho distro miorina amin'ny loharanom-baovao satria ny fonosana rehetra omen'ny rafitra dia manana PKGBUILD mifanaraka aminy (mitovy amin'ny EBUILDs) azo idirana amin'ny tena tsotra amin'ny alàlan'ny ABS, Arch Build System.
Tsy nametraka na inona na inona tamin'ity fomba ity mihitsy aho ary tsy hitako izay mety ho fampiasa azy io, fa amin'ny teôlika dia tsotra ny mekanika: ampidino ny PKGBUILD ny fonosana handrafetana, amboary ireo masontsivana amin'izay hamoriany (mitovitovy Mampiasà saina), manangona ary mametraka na manangona ary miomàna raha miankina amin'ny fonosana hafa izany.
Mikasika ny fanesorana ny fanohanan'ny GNOME amin'ny rindranasa KDE ary ny mifamadika amin'izany dia tsy azoko antoka hoe tena ilaina inona izany, satria fampiharana marobe no ilaina amin'ny endriny roa.
Eny, fa ny Archlinux ABS dia tsy manangona ireo fiankinan-doha avy hatrany, ary tsy misy fanaraha-maso mora amin'ny sainam-pandrefesana farany na hafa. Raha manampy fiankinan-doha ianao dia tsy misy olona manome antoka fa misy izany ao amin'ny tahiry, na koa ny dikanteniny no mety. Ary raha mila vokatra manerantany ianao dia mila faritana fa miankina amin'ny PKGBUILD rehetra hapetraka. Tsy misy koa fanamarinana mialoha momba ny safidin'ny fiankinan-doha. Ny olana iray hafa dia ireo safidy voalaza ireo dia mandeha ao amin'ny PKGBUILD fa tsy ao anaty rakitra generic, izay manasarotra ny fizotry ny fanavaozana.
Ny herin'ny Gentoo dia mitoetra ao amin'ny fahafaha-misafidy, na manerantany (ho an'ny fonosana rehetra), na voafaritra manokana (ho an'ny fonosana iray na maromaro), izay safidy sy fiankinan-doha amin'ny fanangonana no ampiasaina hananganana tarball loharano tsirairay (miova USE manerantany sy eo an-toerana), ao amin'ny mba hitazomana ny fifehezana bebe kokoa ny napetraka. Ny portage dia manamarina fa ho an'ny fonosana voalahatra tsirairay dia natsangana ny fiankinan-doha, na nokasaina hatao, miaraka amin'ireo safidy ilaina mba hanomezana fahafaham-po ireo fiankinana mivadika. Ary koa, raha misy fanovana tokana atao amin'ny USE manerantany, na eo an-toerana, ny portage dia afaka misafidy sy manangona ny zava-drehetra ilaina mba hisaintsainana ireo fanovana ireo. Ary koa, Portage dia afaka manala fonosana izay tsy ilaina intsony: emerge –depclean.
Etsy ankilany, Gentoo dia manolotra fitaovana hanamarinana fa ny rohy mavitrika dia mijanona ho tsy miova, ary ny manamboatra ireo tapaka dia olana tsy azo ihodivirana raha manavao ny rafitrao amin'ny loharano ianao. Toy izany koa, misy fitaovana (sns-fanavaozana) hitazonana ireo fisie fampifanarahana tsy tapaka sy havaozina: Afaka manao fanamoriana mandeha ho azy na amin'ny tanana aho, manary ny fisie vaovao, na mitazona ilay farany.
Mitombina ihany koa ny milaza fa isaky ny fonosana Gentoo dia mamela anao hisafidy amin'ireo kinova marin-toerana marobe, amin'ny fitsapana ary amin'ny sarontava; ary misaotra ireo slot dia azo atao ny mametraka kinova mihoatra ny iray miaraka. Ilaina avokoa izany rehetra izany mba hananana fifehezana tena fiankinan-doha. Ohatra fotsiny amin'ny dev-libs / nss ananako daholo ireto:
3.12.11-r1, ~ 3.13.2, 3.13.3, 3.13.4, 3.13.5, ~ 3.13.5-r1, 3.13.6, 3.14 ary ~ 3.14.1
Toerana tsy mitombina ireo tsy misy ~.
Ny fanangonana seranan'i Gentoo dia manodidina ny 16000 fonosana loharano (misy dikanteny maromaro), ohatra, i Debian stable, fantatra amin'ny famoahana rindrambaiko marobe, dia manome binary 29000 avy amin'ny fonosana loharano 14000. Ary raha tsy ampy ny fonosana dia misy ireo overlay namboarin'ny mpandraharaha, sy ny fiarahamonina, izay manampy rindrambaiko bebe kokoa.
Nanandrana an'i Funtoo ve ianao?
Tsy nanandrana an'i Funtoo aho. Saingy zavatra ilaiko tsy maintsy ananana izy io satria manolotra zavatra tena mahaliana, toy ny fampiasana git fa tsy rsync handrindrana ny ebuilds (izay heveriko fa mahomby kokoa), fomba iray hafa (ary angamba haingana kokoa) hanangonana ny rojom-pitaovana , ary ireo fiasa hafa mety hanampy.
Raha ny fanazavana, izao vao tsapako fa nametraka an'i Juan toa an'i Nick aho (izao dia nitahiry izany tsy tapaka), satria mampiasa Ankh na Rubiño foana aho. Very hevitra tamin'ny mpampiasa facebook aho fa tsy maintsy miditra amin'ireo tranokala izay mangataka kaonty ao amin'ny tamba-jotra sosialy aho hanomezana hevitra.
Nilalao niaraka tamin'i Funtoo kely aho, tsy vitako ny nametaka azy io (tamin'izany fotoana izany dia tsy nahalala na inona na inona momba ny Gentoo aho na ny fomba nitantanana ny FANASITRANA FENO) satria nanana olana tamin'ny sainam-pirenena aho satria tsy nanavao ny "profiles" ka vao mainka nifidy ilay Gentoo taloha aho, rehefa nijery azy aho, zavatra tsotra be ny zava-nitranga tamiko, resaka manampy zavatra vitsivitsy amin'ny xD
Fantatro momba ny 2 taona Arch, ny ABS araka ny ilazanao azy tsara dia ampiasaina amin'ny fanangonana, fonosana 1, ary raha tianay izany dia ataovy toy ny amin'ny Gentoo, tsy maintsy ataontsika amin'ny tanana isaky ny fonosana sy ny fiankinan-doha tsirairay izany. Tsy misy mampitaha azy amin'ny Portage, izay mandeha ho azy ny zava-drehetra, nisy ny programa izay nanandrana naka tahaka ny portage, antsoina hoe pacbuilder, saingy tsy dia mety loatra izany, raha azoko ny hevitrao, na izany aza, faritan'izy ireo ho Distro voarindra.
Te-hanampy aho: Pacman ny mpitantana fonosan'entana tsy misy fangarony, ary io dia karakaraina tsara miaraka amin'ny mimari-droa. Fa o, marina ny fanazavana
Eny, marina tokoa, ny hevitrao sy ny @ Juan dia 100% marina
Fanontaniana. Mampiasa rindranasa gtk ve ianao? Raha eny dia inona ny saina -gtk?
Etsy ambanin'ny Percaff dia hazavaiko tsara, misy fonosana ampiasana ny gtk, amin'ny lafiny iray hafa izay tsy maintsy mampiasa zavatra, ohatra ny gtk, amin'ny sasany dia manangona azy ireo tsy miraharaha -gtk, toy ny nvidia-setting , ity eny na raha mila gtk ianao mba hiasa 🙂
Gentoo dia iray amin'ireo fizarana hajaina indrindra ary maro ny tsara indrindra, fa amin'ny lafiny iray dia misy ny fampahalalana diso momba ity fizarana ity ka mahatonga ny olona maro hisafidy ny tsy hametraka azy io, noho ireo fandraisana anjara ireo dia mahatonga an'i Gentoo hanakaiky kokoa ny olona.
Ny hany ahiako dia ny manana olana betsaka amin'ireo mpamily ho an'ny karatra ATI i Gentoo. ho marina sa handainga?
Sipa ianao, ankehitriny dia nanakivy ahy tsy hametraka gentoo.
Eny ary ity gentoo na freebsd ity.
AMD no manao zavatra tsy mety satria ratsy ny ATi tompony na aiza na aiza distro ary manahirana tokoa ny mampandeha tsara azy ireo nefa tsy lany X: p
+1, AMD no iray manome olana Linux, ary ny fizarana rehetra amin'ny ankapobeny, tsy ny Gentoo ihany.
Saingy tsy novaliany ny ahiahiko, marina fa ny AMD dia tsy manana kalitao antenaintsika rehetra, misy ny fizarana izay tena tsy mifanaraka amin'ny AMD toa an'i Sabayon, ny hafa mandefitra kely kokoa, ao amin'ny vondrona iza no ahitana an'i Gentoo?
Andraso, efa nakariko ny iso sabayon ary hosedraina aho.
Nahaliana ahy ny hevitrao.
Ny Radeon HD 6870 dia niasa tsara ho ahy, fa noho izany dia tsy maintsy ampiharina ao anaty kernel ny fikirakirana sasany, noho izany mila asa bebe kokoa ny fametrahana ireo mpamily maimaim-poana ary koa ireo mpamily tompona amina sary AMD fa tsy Nvidia.
Miaraka amin'ny dvd sabayon live aho dia hametraka gentoo amin'ilay tutorial x11tete11x ary noho izany dia hialako tanteraka ity nofy ratsy antsoina hoe debian ity.
Tsy misy mahatafintohina ny Debianita. Fa amiko dia aretin'andoha io ary tsy mifangaro tsara kde.
Diazepan ny sainam-pirenena izay ambara ao amin'ny rakitra make.conf dia misy fiantraikany amin'ny rafitra iray manontolo. x11tete11x dia mametraka ny saina gtk ho an'ny rindranasa manokana fotsiny fa tsy ho an'ny rafitra iray manontolo. Ataonao amin'ny alàlan'ny fanovana ny rakitra /etc/portage/package.use ity. Raha sendra diso aho dia manantena aho fa x11tete11x no hamoaka antsika amin'ny fisalasalana.
tonga lafatra ny valinteninao 😀
Mourinho mandeha izao dia hoy izy:
Fidirana tena tsara, tiako be io karazana fidirana io satria amin'izay no ahitan'ny olona gentoo, «distro« ho an'ny lehilahy macho ».
Valio i Mourinho mandehana izao
Ny fametrahana «gentoo» mahazatra ny «gentoo», «console» madio, dia mety hampatahotra ny sasany, satria tanana izy io, ary mamela ny pc ho be loatra mandritra ny ora maro. Mba hampihenana ny mety hisian'ny lesoka (sy hahafahana manao zavatra hafa amin'ny pc), hametraka foana aho mampiasa pendrive avy amin'ny SistemRecue CD, izay efa gentoo live, izay mamela ny fametrahana tsy misy olana amin'ny chrooting na ny fisafidianana ireo fitaratra ( Mitranga amin'ny ubuntu live aho), maka tahaka sy mametaka baiko avy amin'ny boky tsy misy olana. Mila manisa ianao raha hampiasa gentoo amin'ny sary, rehefa manangona ny kernel dia alao antoka fa mifanaraka amin'ny xorg ... noho izany dia mila mamaky ny boky torolalana sy xorg ianao mba tsy hamerina indroa. Ianao koa dia mila manoratra xorg.conf amin'ny tanana miaraka amin'ireo fanapahan-kevitra, raha tsy izany dia milatsaka. Na izany na tsy izany, raha misy lesoka fanombohana dia azonao atao ny miditra indray avy amin'ny cd mivantana ary mandinika ny zava-drehetra, tsy tokony ho very faharetana ianao, hanao ny zava-drehetra indray, toy ny nanjo ahy 😛
Ry olona, ​​fanontaniana adaladala, azo ovaina ve ilay Paositra? satria olona maromaro no miresaka amiko momba ny olana isan-karazany, toy ny fomba fanatanterahana ny karatra horonantsary Intel (izay tokony hokasihina ary ny hafa satria farafaharatsiny olona iray miaraka amin'izay apetrako eo (izay saika lazain'ny wiki ), tsy nety taminy izany), avy eo te-hanao famerenana aho manampy ireo vahaolana rehetra ireo sy rohy manokana kokoa hamahana ireo olana ireo, azonao atao ve izany?
Hanampy pdf hafa ve ianao?
Ny hevitra dia ny manampy zavatra amin'ny PDF ary mampakatra ilay kinova vaovao (ny hevitro manokana dia ny manavao ity torolàlana ity miaraka amin'ny toro-hevitra sy vahaolana rehetra ho an'ny toe-javatra toy ny karatra horonantsary, sns (tsy afaka miresaka afa-tsy amin'ny nvidia aho, ary ho an'ny KDE, iza avy ireo zavatra ampiasaiko 🙂) ka raha lazainao amiko hoe inona ny birao anananao sy ny fomba namahanao azy dia tiako ampiana (ny fomba namahanao azy raha sendra manana olana ianao)
Mametraka gentoo aho izao, mampiasa ati radeon 6450, holazaiko anao ny fandehany.
Mampiasa tambajotra wifi koa aho toy ny tariby.
Eny azonao atao, rehefa nampakatra azy ianao, mifandraisa amiko na iray amin'ireo admin ary hampianay azy io amin'ny paositra. 🙂
Lavorary! Misaotra 😀
Eny, nahita bibikely be dia be aho niaraka tamin'ity rafitra fametrahana ity 😀
Andramo mivantana sabban 64 bit.
Mandefa lesoka aho rehefa manangona, satria nanandrana nametraka ny kernel tao anaty 32 bit aho ary nampidina ny sehatra tamin'ny 32.
Rehefa mampiasa local-gen aho dia mandefa error es.ES-UTF-8 rehefa mampiasa es.MX-UTF-8.
Fa hey, rahampitso aho mametraka avy amin'ny cd ofisialin'ny live gentoo.
Izao hitako izao dia mametraka 50 gbs i sabayon. Wow.
tsy maintsy nifampiraharaha tamina CD mivantana tamin'ny maritrano mitovy ianao, ary ny zavatra eo an-toerana dia toa hadisoana syntax noho ny nanoratanao azy tao,
mitahiry, ary avy eo manao local-gen
raha sanatria misy fisalasalana xD:
Rehefa avy nahita tao amin'ny partitionmanager KDE ary ny fametrahana an'i Sabayon dia 51 bgs ary amin'ny gparted dia 21 gbs.
Fa maninona no izao?
ATTENTION: Ireo izay hametraka ny KDE 4.9.5 ny ampahany amin'ilay lesona izay manao:
«Mipoitra wget && wget http://git.overlays.gentoo.org/gitweb/?
wget dia tsy misintona tsara ny rakitra, noho izany dia mila miditra ao anaty rohy ianao ary mandika ny atiny rehetra ao anaty rakitra KDE-4.9.5.keywords, ao anaty /etc/portage/package.keywords/
Aorian'izay rehefa mampakatra ny fanitsiana vaovao an'ity PDF ity aho dia hanitsy ireo olana ireo, hanampy koa aho «ChangeLog» hahafantaranao fa nanova ny fampianarana iray aho tamin'ny iray hafa 😀
fiara_96 dia hoy izy:
Ity tutorial ity dia mety amiko, mikasa ny hametraka Gentoo aho rahampitso miaraka amin'ny Fedora iso: B
Valiny amin'ny car_96
F18 efa mivoaka O_o ??? Nahita ny tondrozotra ho an'ity kinova ity ve ianao? Amin'ny fotoana sasany, ny F18 dia ho revolisionera.
Miarahaba, ny dingana tsirairay amin'ny lesona dia mbola manan-kery sa misy tolo-kevitra fanampiny tokony ho raisiko, hanangana Gentoo aho ary sambany aho miaraka amin'ity distro ity, antenaiko fa hahazo izany
Miarahaba anao ary tuto tsara
Ny marina dia tsy narahiko tamin'ny taratasy indray, ny boky boky Gentoo dia hitondra anao amin'ny làlana tsara, nanaraka ity fampianarana ity aho mandra-panaonao ny chroot ary ao anatin'ny rafitrao ianao, dia raiso ny make.conf ho ohatra, tsy misy overload ny make amin'ny zavatra marobe ao amin'ny USE variable, ary nanaraka ny boky torolàlana ofisialy Gentoo aho